စားတော်ပဲပြုတ်စားခြင်း အကျိုး ကျေးဇူးများ – EverBestMM
ဇြန္လ ၁ ရ�...
သား ဖိန ပ�...
Ever Y | February 18, 2020 | Health, Knowledge | No Comments
*ဆေးသိပ်ပံနညျး အရ ဓာတျခှဲ စမျးသပျကွညျ့ရာ စားတောျပဲပွုတျထဲ တှငျ လူသားတို့ ကနြျးမာရေးကို အထောကျအကူ ဖွစျစသေော ဗီတာမငျနှငျ့ သတ်တုဓာတျ တို့ အလုံအလောကျ ပါရှိပွီး၊
ဘေးဖွစျစတေတျ သော ကိုလကျစထရော လုံးဝမပါရှိသညျ့ အတှကျ နေ့စဉျ စားသုံးပေးသငျ့သော အာဟာရဖွစျကွောငျး USDA (ခေါျ) အမြိုးသား အာဟာရပွု စစျတမျးမြားနှငျ့ WHFoods တို့မှ အခိုငျ အမာထောကျခံ ထားကွ ပါသညျ။….
1. *ပဲပွုတျထဲတှငျ အဆီဓာတျနှငျ့ ကယျလိုရီပါဝငျ မှု မရှိသလောကျ လှနျစှာ နညျးပါးသောျ လညျး၊ အာဟာရ ဓာတျကွှယျဝ သောကွောငျ့ ကိုယျခန်ဓာအလေးခြိနျ ပုံမှနျထိနျး သိမျးလိုသူမြား မှီဝဲ စားသုံးသငျ့ ပါသညျ။
2. *ပဲပွုတျထဲတှ ငျခြဖေကြျလှယျသော အမြှငျဓာတျ အမွောကျအမြား ပါရှိ၏။ ထို အမြှှငျဓာတျမြားသညျ အစာခွေ လမျးကွောငျး အတှငျး အစာကို လှုပျရှားရှေ့လြားစသေညျ့ အလိုအလြောကျကွှကျသား လှုပျရှားမှုကို အားပေး သဖွငျ့ ဝမျးမခြုပျ စပေါဘူး။
3. *စားတောျပဲပွုတျ ထဲတှငျ nicotinic အကျဆစျ ပါရှိသဖွငျ့ ၊ သှေးထဲရှိ မကောငျးသော ကိုလကျစထရော ကို လြော့ခပြေးနိုငျ၏။
4. *စားတောျပဲသညျ သံဓာတျအရငျးအမွစျ ဖွစျခွငျးကွောငျ့ သှေးနီဥဆဲလျ မြား ကို ကောငျးစှာ တညျဆောကျ စကော၊ သှေးအားနညျးရောဂါ နှငျ့ အလှနျအမငျး မောပမျးခွငျးတို့မှ ကာကှယျပေးနိုငျပွီး၊ ကိုယျခံစှမျးအား ကို တိုးတကျမွငျ့မား လာစပေါသညျ။ ထို့ပွငျ အဆုတျထဲရှိ အောငျစီဂငြျကို ခန်ဓာကိုယျအနှံ့ပို့ဆောငျပေး၏။
5. *စားတောျပဲထဲ တှငျ lutein နှငျ့ carotenoid တို့ပါရှိသဖွငျ့၊ ပဲပွုတျကို ပုံမှနျစားသုံးသော သူမြားသညျ အသကျအရှယျကွီးရငျ့ လာခွငျးကွောငျ့ မကြျစေ့ ရောဂါအမြိုးမြိုးနှငျ့ မကြျစေ့ ရတေိမျရောဂါ ဖွစျနိုငျခြေ အလားအလာ ကို လြော့ခပြေးနိုငျကွောငျး နိုငျငံတကာ ဆေးသိပ်ပံပညာရှငျမြားက အကွံပွုထားကွပါသညျ။
6. *စားတောျပဲပွုတျ တစျခှကျစာပမာဏ ထဲတှငျ ဗီတာမငျကေ ၄၄% ပါရှိသညျ့ပွငျ၊ ဗီတာမငျဘီ လညျး ပါရှိသဖွငျ့ အရိုးကို ကနြျးမာ သနျစှမျးစကော၊ ဟိုမုနျး အပွောငျးအလဲကွောငျ့ အရိုးကွှတျဆတျခွငျး မှလညျး ကာကှယျပေးနိုငျ၏။ ထို့ကွောငျ့ ကလေး/လူကွီး မြားသာမက၊ ကိုယျဝနျဆောငျ မိခငျလောငျးမြားပါ ပဲပွုတျကို စားပေး သငျ့ပါသညျ။
7. *သှေးထဲရှိ သကွားပမာဏကို ပုံမှနျဖွစျစခွေငျး၊ ခန်ဓာကိုယျ အတှကျ လိုအပျသော ခှနျအားမြားကို ထုတျ လုပျပေးခွငျး၊ ကိုယျတှငျးရှိ ဇီဝကမ်မဖွစျစဉျကို တိုးတကျ ကောငျးမှနျစခွေငျး စသညျဖွငျ့ ကောငျး ကြိုးပွု ပါသညျ။
8. *Free radicals မြားသညျ ခန်ဓာကိုယျထဲရှိ သှေးကွောနံရံ မြားကို အနညျကြ ပိတျဆို ့စေ ကာ၊ သှေးကွောမမြား ကို ပကြျစီးစပွေီး၊ အဆီပိတျ ရောဂါ၊ လဖွေတျခွငျး၊ အဆစျရောငျ လေးဘကျနာ ရောဂါ မြားကို ဖွစျစေ၏။
စားတောျပဲ ထဲတှငျ ပါရှိသော Flavonoids နှငျ့ phytonutrients မြားသညျ ဓာတျတိုး ဆနျ့ကငြျပစ်စညျး အဖွစျ စှမျးဆောငျပေးကာ၊ ထို Free radicals မြားကို တိုကျထုတျ ပေးသဖွငျ့ အဆိုပါ ရောဂါမြားကို မဖွစျစနေိုငျပါ။
ဒါ့ပွငျ သစျပငျထဲ တှငျ ရှားရှားပါးပါး တှေ့ရသညျ့ lectins ဓာတျပါရှိ သဖွငျ့၊ သှေးနီဥဆဲလျမြား ပြောျဝငျစကော၊ သှေးခဲခွငျးမှ ကာကှယျ ပေးပါသညျ။
9. *ဗီတာမငျဘီ ဓာတျပေါငျးစု ပါရှိကာ homocysteine ပမာဏကို လြော့ကစြသေဖွငျ့ နှလုံးရောဂါ အမြိုးမြိုးကို ထိထိရောကျရောကျ ကာကှယျပေးသညျ့ အပွငျ နှလုံးရောဂါနှငျ့ ပတျသကျဆကျစပျလကြျ ရှိသောလဖွေတျခွငျး တို့ကိုလဲမဖွစျစပေါ။
ထို့ကွောငျ့့ တစျပတျလြှှငျ အနဲဆုံး တစျကွိမျ စားပေး သငျ့ကွောငျး ဆေးသိပ်ပံပညာရှငျမြားက အကွံပွု ထားကွပါသညျ။
10. *စားတောျပဲထဲတှငျ ဗီတာမငျ အေ-ဘီ-စီ-အီး၊ omega-3 တို ့ပါရှိသညျ့ပွငျ၊ ဇငျ့သတ်တုဓာတျ အလုံအလောကျပါရှိ၏။
ထိုဓာတျပေါငျး စုမြားသညျ လပွှေနျဖောငျးပှသညျ့ ရောဂါ၊ မှကျခရုရောဂါ၊ အယျလျ ဇိုငျမား (ခေါျ) ဦးနှောကျအကွိုဇရာရောဂါ တို့ကို ကာကှယျပေး နိုငျပါသညျ။
11. *စားတောျပဲပွုတျထဲတှငျ glycemic ဓာတျပါဝငျမှု နဲပါးပွီး၊ သှေးထဲရှိ သကွားပမာဏကို ထိနျးပေးနိုငျွ ခငျးကွောငျ့ ဆီးခြိုရောဂါ သညျမြား အတှကျ ပဲပွုတျဟာ အကောငျးဆုံး အဖောျမှနျဖွစျ ပါသညျ။
12. *မက်ကစီကိုနိုငျငံတှငျ မကွာသေးခငျက လေ့လာစမျးစစျခကြျ အရ၊ စားတောျပဲထဲတှငျ polyphenol ဓာတျပါရှိသဖွငျ့၊ နေ ့စဉျ စားတောျပဲပွုတျ ၂-မီလီဂရမျမြှ စားပေးရုံဖွငျ့ အဆာအိမျကငျဆာကို ကွိုတငျ ကာကှယျပေးနိုငျသညျဟု ဆိုရပါသညျ။
13. *မဂ်ဂနီစီယမျ သတ်တူဓာတျ ကွှယျဝစှာပါရှိ၍၊ သှေးတိုးရောဂါကို မဖွစျစပေါ။
14. *ဖောလိပျဓာတျ အရငျးအမွစျ စုဝေးရာ စားတောျပဲပွုတျကို ကိုယျဝနျဆောငျ မိခငျမြား စားပေးခွငျးဖွငျ့ မှေး ဖှားလာသော ကလေးငယျ မြားတှငျ မှေးရာပါ ဦးနှောကျနှငျ့ အာရုံကွောဝေ ဒနာမြား ဖွစျနိုငျခြေ အလားအလာ နဲပါးစပေါသညျ။
15. *အမြိုးသမီးမြား သှေးဆုံးကိုငျမဖွစျစပေါ။
*စားတောျပဲထဲတှငျ သဘာဝအလြောကျ ပါရှိသော purines ဓာတျက ဂေါကျရောဂါ သမားမြားနှငျ့ ကြောကျကပျဝဒေနာသညျ မြားကို ဘေးထှကျဆိုးကြိုးဖွစျစနေိုငျ၍၊ အထူးရှောငျ ရှားသငျ့ပါသညျ။
*အာဟာရဓာတျ ကွှယျဝသော ပဲပွုတျ ကို စြေးစြေးပေါပေါ နှငျ့ အလှယျတကူရရှိနိုငျသဖွငျ့၊ နိုငျငံတိုငျးတှငျ “a poor man’s meat (၀ါ) ဆငျးရဲခြို ့တဲ့သူမြားအတှကျ အသားဟငျးလြာ” ဟု တငျစားခေါျဝေ ါျလေ့ရှိကွ ပါသညျ။
*ဆေးသိပ်ပံပညာရှငျမြားကတော့ “powerfood” ဟု ခေါျကွ၏။ ထို ့ကွောငျ့ မိမိတို့လကျတကမျးတှငျ အလှယျတကူ စြေးနြှုနျးခြိုသာစှာ ရရှိနိုငျသော “စားတောျပဲပွုတျ” လေးမြားကို နေ ့စဉျ သုံး အစားအစာအဖွစျ စားသုံးသငျ့ပါကွောငျး ဗဟုသုတ အဖွစျ မြှဝပေေး လိုကျ ပါသညျ။
ပြင်ဦးလွင်ရှိ အဆောက်အအုံ ၅ ခုကို အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ရန်
ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြ ရွိေနတဲ့ အိမ္ဟာ ေသခ်ာေပါက္ ဆင္းရဲေနတဲ့အိမ္ပဲ
COVID ကာလ မွာ မိဘ တုိင္း သိထားသင့္ တဲ့ အေ ရးႀကီးအေႀကာင္းအ ရာ – ေကလးႏြ င့္ mask ‼️
ဖရဲ သီး နဲ႕ ဘဲဥ တြဲစားရင္ တကယ္ေ သပါသလား …ျမန္မာေတြ တစ္သက္လံုးမိလာတဲ႔ ဂ်င္းမ်ား
ဇြန္လ ၁ ရက္ တြင္ ျပဳလုပ္မ ည့္ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ ဘာေလ ထီဖြင့္ပြဲ တြင္ ယခင္လကထက္ ဆုေငြႏွစ္ဆ ေက်ာ္ တိုးျမႇင့္ခ်ီးျမႇင့္မည္
ရွင္မထီး တန္ေဆာင္း မွ ထူး ဆန္းေသာ အဖိုးအို ရဲ႕ ႀကိဳတင္ေ ဟာကိန္း ယခုအမွန္ျဖစ္ေနၿပီလား
သား ဖိန ပ္ မေပ်ာက္ေတာ့ဘူး ေဖႀကီး ေနာက္ဘဝဆက္ တိုင္းဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးေဝးပါေစ သားေလးရယ္
တရုတ္ နဲ႔ ေပါင္းစားေန တဲ့ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအ ဖြဲ႕ကုိ အဆက္ အသြယ္ျဖတ္ၿပီဟု ထရမ့္ေၾကညာ
သင့္အိမ္ ကို ကံေကာင္းျခင္းေတြ ေဆာင္က်ဥ္းေပးနိုင္ တဲ့ အေဆာင္ေ ယာင္ အျပင္အဆင္မ်ား
ခ်င္းျပည္နယ္ မွာ ထူးဆန္း တဲ့ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ဝက္ ၁၈၇ ေကာင္ ရုတ္ တရက္ ေသ ဆုံး